Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ठेकेदार जोगाउन चलखेल – Emountain TV
ठेकेदार जोगाउन चलखेल
काठमाडौं, २५ साउन । परीक्षण क्रममा भत्किएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरलाई आयोजना कार्यालय आफैंले मर्मत गरेर ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने चलखेल गरेको छ।
बाँकेको ४३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी सुरु गरिएको उक्त आयोजना अबको दुई वर्षमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ। हालसम्म आयोजनको ५५ प्रतिशत काम सकिएको बताइन्छ। तर, पटकपटक मूल नहर भत्कने क्रम नरोकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना संकटमा परेको छ।
शर्माले १० प्रतिशतमात्रै पानी छोड्दा पनि नहर भत्किएको भन्दै छानबिन माग गरे। ‘नहर चिरिएको छ, जनता त्रसित छन्’, उनले भने, ‘दोषी सरकार, कर्मचारी वा ठेकेदार को हो छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसको नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिओस् ।’ गुणस्तरहीन कामको मारमा जनता परेकाले सिक्टाले निम्त्याएको असरबारे गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। ‘नहरका कारण जनता आन्दोलित भएका छन्, यसमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ’, उनले भने। उनले प्रदेश वा केन्द्र सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सांसद शर्माले सिक्टा आयोजनामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गरे पनि त्यसबारे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही बताएनन्। आजको नागरिक दैनिकमा खवर छापिएको छ ।